सात लाखभन्दा बढी कर्मचारी र झण्डै दुई करोड स्वयंसेवकको माध्यमबाट आइएफआरसी ‘महासचिव’ सम्हाल्ने नेपाललाई संसारसँग परिचित गराउने पहिलो नेपाली - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
सात लाखभन्दा बढी कर्मचारी र झण्डै दुई करोड स्वयंसेवकको माध्यमबाट आइएफआरसी ‘महासचिव’ सम्हाल्ने नेपाललाई संसारसँग परिचित गराउने पहिलो नेपाली
प्रकाशित : सोमबार, माघ १३, २०७६११:४५ पब्लिक आवाज /संवाददाता
मलम लगाऊ आर्तहरुको, चहराइरहेको घाउ …।’ महाकवि देवकोटाका रचना सुनाउँदै जगन चापागाईंले भन्नुभयो, “यहीभित्र छ – मेरो जीवन । संसारिक सुख ।” हँसिलो स्वाभाव छ– उहाँको । कपाल सेतो हुन बाँकी छैन । शरीर खाइलाग्दो छ । हेर्दा लाग्छ– उहाँ भर्खरको तन्नेरी हुनुहुन्छ । उहाँमा रहेको अथाह विद्वताले नयाँ इतिहास रचना मात्र गरिदिएको छैन, वीर मात्र होइनन् नेपाली ‘बौद्धिक’ हुन भन्ने सन्देश विश्वलाई प्रवाह गरिदिएको छ । उहाँका मानवीय सेवाका क्षेत्रमा खारिएका तीन दशकको अनुभवले उहाँलाई मात्र होइन, नेपाललाई संसारसँग परिचित गराएको छ ।
आपत्कालीन मानवीय सेवामा तल्लीन परोपकारी सस्था रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)को सर्वाेच्च पद ‘महासचिव’को जिम्मेवारी उहाँले यही माघ १८ गतेदेखि (१ फेब्रुअरी २०२०) सम्हाल्दै हुनुुहुन्छ । विश्वका १९२ देशका रेडक्रस महासङ्घमा आबद्ध छन् । हाल महासङ्घको उपमहासचिव पदमा कार्यरत पहिलो नेपाली उहाँले ‘महासचिव पद’ सम्हाल्ने दक्षिण एशियाली क्षेत्रको पहिलो व्यक्तित्व हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ ।
युद्धका पीडाले छट्पटाइ रहेकालाई मानवीय सेवा स्वःस्र्फुत प्रदान गर्न हेनरी ड्युनाले सन् १८६३ मा रेडक्रस स्थापना गर्नुभएको थियो । युद्ध र युद्धका परिणाम, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्, विपद्ले सिर्जना गरेका असर, गरिबी, भोकमरी, विषमता न्यूनीकरण, सङ्कटासन्न समुदायलाई उत्थानशील बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा महासङ्घले मानवीय सहायता प्रदान गर्दछ । सात लाखभन्दा बढी कर्मचारी र झण्डै दुई करोड स्वयंसेवकको माध्यमबाट करिब एक अर्ब जनसङ्ख्यामा वर्षेनी मानवीय सहायता महासङ्घले पु¥याएको जनाइएको छ ।
महासङ्घमा ‘महासचिव पद’लाई सर्वाेच्च मानिन्छ । कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । ‘गभर्निङ बोर्ड’ले चाहेमा अर्काे कार्यकाल थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । कार्यरत महासचिवको कार्यकाल समाप्त हुनु एक वर्ष अगाडिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानमा छनोट कार्य शुरुआत हुने गर्दछ । “महासचिव पदमा दरखास्त दिउँ कि नदिउँ दोधारमा थिए । चिनेजानेका सबैले निवेदन दिन हौस्याए । दिँदैमा के हुन्छ ? सबैले भने । मैले देखेको कार्ययोजना (ड्रिम पेपर) तयार गरेँ र निवेदन राखे ।” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणबाट राम्रो नतिजा निस्कियो । विभिन्न चरण पार लगाउँदै गएँ, निरन्तर अध्ययन तथा अनुभवलाई एकीकृत बनाए । कति रात निदाइन ।”
मतदानमा उहाँको पक्षमा दुई तिहाइ आएको जनाइएको छ । मत सङ्ख्या बाहिर ल्याउने प्रचलन रहेको छैन । महासङ्घको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी महासचिव विजयी हुने उहाँ पहिलो व्यक्ति भएको बताइएको छ । हाल महासङ्घको अध्यक्ष फ्रान्सेस्को रोक्का हुनुहुन्छ । इलाड सईले महासचिवको अन्तिम कार्यभार सम्हालिरहनुभएको छ । “मत परिणाम कुरिरहेको थिइँ । मतगणनापछि लगत्तै अध्यक्ष फ्रान्सेस्कोले कङ्ग्राचुलेसन जगन भन्दै फोन गर्नुभयो । ‘थ्याङक यु’ मात्र भने । अब ‘थ्याङ्क यु सो मच’को जिम्मेवारी पूरा गर्न बाँकी छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “बोर्ड सदस्य देशले मेरो विगतको कामको मूल्याङ्कन र आगामी लक्ष्य देखेर मतदान गरेको ठानेको छु । मत दिने, नदिने सबै देशलाई धन्यवाद दिन्छु । आगामी दिनमा समान व्यवहार गर्छु ।”
“मलाई बाल्यकालदेखि ‘मानवीय सेवा गर्नुपर्छ’ भन्ने भोक जाग्न थालेको हो । मेरो जीवन रहुञ्जेल भोक जागिरहन्छ । भोकको छट्पटिएकाले मलाई यहाँसम्म पु¥यायो । सेवा गर्नेले कमाइ खोज्नु हुँदैन । कयौँ पटक आफ्नो आम्दानी दान गरेको छु, उहाँले भन्नुभयो, “प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सङ्कटासन्न समुदायको उत्थानमा नयाँ सोचले काम गर्ने योजना बनाएको छु ।”
पाँच दशकअघि चितवन दिव्यनगरमा सामान्य परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो । आठ दाजुभाइ र दुइ दिदीबहिनी भएको परिवारमा उहाँ हुर्किनुभयो । अहिले ५२ वर्षमा हिँडिरहनुभएको छ । “मैले मेरो लागि कहिल्यै सोचिन । ‘अरुलाई के गर्न सकिन्छ, के दिन सकिन्छ’ भन्ने सेवाभाव जाग्दथ्यो । विसं २०३७ मा भरतपुरस्थित बालकुमारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा जुनियर रेडक्रस सर्कल गठन गरेँ ।”
पछिल्लो समय प्रायः उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा जुनियर रेडक्रस सर्कल गठन भएका छन् । अमृत साइन्स कलेजबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेपछि उहाँले भारतबाट खानी (माइनिङ) इञ्जिनीयरिङमा स्नातक अध्ययन पूरा गर्नुभएको थियो । “बाबुआमाले मलाई डाक्टर भएको देख्न चाहनु हुन्थ्यो । बायोलोजी पनि पढेँ । इञ्जिनीयर भएको सुनाएपछि ‘दुःख पाइस्’ भन्नुभयो । आधा जीवन सफल भएको ठानेँ । म दुःखमा सुख देख्दथे । उहाँले भन्नुभयो, “दुःखमा जीवन लुकेको हुन्छ, सुखमा हुन्न ।”
भुटानी शरणार्थी शिविरमा काम गर्न रेडक्रसले कर्मचारी माग ग¥यो । अध्ययन पूरा भएकाले उहाँले निवेदन दिनुभयो । नाम निस्केपछि दमक पुग्नुभयो उहाँ । उहाँले शुरुआतका दिनमा गरेका कामले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा प्राप्त ग¥यो । “शरणार्थीमध्येकी एक युवती गर्भवती रहेको जानकारी भयो । कसरी उहाँको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने भनेर चिन्ता भयो । भोलिपल्ट सिलाइबुनाइको तालीमको शुरु गरेँ । उनीलगायत समूहलाई आत्मनिर्भर बनाए । ती युवती पीडाले मलाई मानवीय सेवामा काम गर्न थप प्रेरणा मिल्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँ पदभन्दा कामलाई सर्वाेच्च ठान्नुहुन्छ । कामले नै नाम कमाउने हो । शिविरमा मानवीय सहायताका विविध क्षेत्रमा गर्नुभएको कामलाई उच्च प्रशंसा गर्दै महासङ्घले उहाँलाई आफ्नो मुख्यालय जेनेभा बोलायो र सन् १९९६ ताजकिस्तानमा खटाइदियोे । ‘जीवन छोटो छ, जतिदिन रहिन्छ, मानव सेवामा लगाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई उहाँले कहिल्यै जीवनबाट विचलित हुन दिनुभएको छैन । “सन् १९९६ जुनमा ताजकिस्तान गएँ । सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा गृहयुद्धले तहसनहस बनाएको थियो । वृद्धामात्र रहेका थिए । छ हजार वृद्धालाई स्याहार गर्ने कामको जिम्मा पाएको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो, “ती वृद्धालाई अस्थायी वासस्थानको व्यवस्थादेखि खाना खुवाउने अन्य सेवामा तल्लीन रहेँ । कति वृद्धाले आफ्नै सन्तान सम्झेर मलाई अङ्गालो हालेर रोए । आँशु पुछिदिँदा दिन बितेको पत्तै पाउन्न थ्ये । छोटो समयमा उत्कृष्ट सेवाको प्रबन्ध मिलाए । वृद्धालाई औधि खुशी बनाए ।”
तिनै वृद्धाले दिएको ‘आशीर्वचन’ उहाँका लागि थप मार्गदर्शन बन्न पुग्यो । सङ्घको विघटनले मध्य एशियामा समेत चरम मानवीय सङ्कट निम्त्याएको थियो । उहाँले सङ्कटलाई टार्न महासङ्घलाई नयाँ नयाँ योजना पस्कँदै जानुभयो । उहाँका गहकिला सुझावलाई संस्थाले शिरोपर गर्दै कार्यान्वयनमा उतार्दै गयो । सङ्कटासन्न समुदायको व्यवस्थापनमा उहाँले गर्नुभएको कामले उच्च प्रशंसा जमाइरह्यो । “सेवाभन्दा ठूलो केही हुँदैन, सेवा गर्नेहरु भोकै पर्दैनन् उहाँले भन्नुभयो, “पैसाको पछाडि कहिल्यै दौडिन ।”
यसबीचमा चीनको सिचुवानको भूकम्प, म्यान्मार र बङ्गलादेशमाको आँधी पीडितलाई सहयोग पु¥याउन उहाँले नै नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो । “अफिस काममा व्यस्त थिएँ । नेपालमा भूकम्प गयो, क्षतिको आँकलन भएको छैन, भूकम्पको पराक्रम जानेक्रम जारी रहेको सूचना पाएँ । त्यस्तो भौगोलिक बनोटमा कसरी खोजी, उद्धार तथा राहत पु¥याउने भन्ने विषयमा योजना थिए । नेपाल सरकार र नेपाल रेडक्रसलाई जानकारी गराई । उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल जेनेभाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको अपिल जारी भयो ।”
महासङ्घको सेक्रेटरी काउन्सिलले उहाँलाई सन् २०१५ जुलाइमा ‘चिफ अफ स्टाफ’को नियुक्ति दियो । यसपछि उहाँ सन् २०१७ मे देखि उपमहासचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ पछिल्लो तीन दशकमा विश्व भएका मानवीय सङ्कटको साक्षी बन्नुभएको छ । पछिल्ला विपद्लाई नजिकबाट नियाल्ने र व्यवस्थापन उहाँका ज्ञानले गरेको छ । “जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपद्, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपत्तिलाई धेरै देशले भोग्दै आएका छन् । यही अप्ठ्यारो, विपद्मा परेकालाई उद्धार गर्ने र आगामी दिनमा विपद्को सामना गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको ।” उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय महासङ्घले समुदायमा आधारित दिगो विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । उहाँले नै सो अवधारणालाई अगाडि सार्नुभएको थियो । “सामाजिक संस्थाले काम गरेर मात्र न गरिबी घट्छ, न समृद्धि हासिल हुन्छ । सर्वपक्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय योजना हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्छ उहाँ भन्नुहुन्छ, “राज्यले नेतृत्व नलिइ गरिबी घट्दैन । आपत्मा परेका, गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका र जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेकालाई समस्याबाट निकाल्ने अथक परिश्रम गर्छु, यही मेरो जीवनको सपना हो ।”
घुस लिएको आरोपमा पक्राउ पर्ने गृहका घुस्याहा कर्मचारी बढी
अदालतमा कार्यरत चार न्यायाधीश कारवाहीमा ,तीन मुख्य न्यायाधीश सरुवा
नेपाली सिमामा भारतले बनाएको बाँध भत्कियो : भारतमा भागाभाग, नेपालीलाई राहत, पानीको सतह घट्यो !
देश “शोक र चोट”मा डुबेको बेला उद्धारमा हैन विरोधकै लागि सडकमा कांग्रेस !